Midowga Yurub Oo Dawladda Soomaaliya Ugu Deeqay 100 Milyan Oo Yuuro – somalilandtoday.com
Midowga Yurub Oo Dawladda Soomaaliya Ugu Deeqay 100 Milyan Oo Yuuro
(SLT-Muqdisho)-Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa shalay magaalada Muqdiso ku kala saxiixday heshiis taageero lacageed oo dhan €100 million looga tala galay miisaaniyadda dowladda in lagu kabo labaada sana iyo barka soo socda.
Heshiiska oo ay qalinka ku duugeen Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Wakiilka midowga Yurub u gaabilsan Iskaashiga iyo Horumarinta caalamiga Neven Mimica.
Heshiiska kaddib waxay labada mas’uul ay qabteen warsaxafadeed ayaa waxay sheegeen in lacagtaasi wax looga qabanayo dhisitaanka heykalka Dowladeed ee ku dhisan Nidaamka Federaalka.
Lahaanshaha sawirkaVILLA SOMALIAImage captionAstaanta Midowga Yurub
Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan iskaashiga caalamiga ah iyo horumarinta, Neven Mimica, ayaa sheegay “Maanta Soomaaliya iney barooraneyso. Midowga Yurub wuxuu xushmad iyo ixtiraamba uu u hayaa dhibanayaasha iyo qoysaskooda.
“Si dadki waxyeellada ka soo gaartay qaraxaasi loo xusuustana waa in aan yeelnaa geesinimo waxaanna go’aansannay inaan Soomaaliya dhaqaale ku caawinno si ay dowladnimadeeda u sii adkaato”
Taageeradan koobanna waa ficil muujinaya kalsoonida midowga Yurub uu u hayo Soomaaliya si ay dowladda hay’adaheeda ay dib ugu soo dhisto oo ay bulshada u siiyaan adeeggi ay uga baahnaayeen.
Taageerada lacageed ee maanta Muqdisho ku kala saxiixdeen Midowga Yurub iyo Dowlada Federaalka Soomaaliya oo dhan 100 milyan oo Yuuro, waxaa heshiiska qalinka ku duugay Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Wakiilka midowga Yurub u gaabilsan Iskaashiga iyo Horumarinta caalamiga.
98 milyan oo lacagtaasi ka mid ah si toos ah waxaa looga kabayaa miisaaniyadda dowladda dhexe halka 8 milyan ee soo hartayna kobcinta awoodda hay’adaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wax looga qabanayo.